By Na Eng, Molly Miles
Maamuusta Wada-hawlgalayaasha Deeqaha AAPI ee Kala Duwan
Inta lagu jiro waqtigan nacaybka ajnabiga ah ee sii kordhaya ee lagu bar tilmaameedsanayo Aasiya Ameerika iyo Jasiiradaha Baasifigga — iyo wakhti kasta-waxaan u taaganahay midnimo bulshooyinka AAPI ee halkan ku yaal Minnesota iyo guud ahaan dalka. Waxaan ka murugooneynaa kuwii naftooda ku waayey aaggii Atlanta waxaanuna taageereynaa dhammaan dadkii la kulmay jahwareer iyo cabsi midab takoor.
Philanthropy waxay leedahay door ah inay ka ciyaarto sidii si fiican loo fahmi lahaa cadaadiska soo food saara bulshooyinkeenna kala duwan ee AAPI, iyadoo la kordhinayo aragtiyaha AAPI, iyo maalgelinta hoggaankooda. Waxaan joognaa McKnight waa ka go'an tahay si aad uga sii wanagsanaato Minnesota iyo wixii ka sii dambeeya.
Waxaan u baahanahay inaan sameyno wax ka badan #StopAsianHate. Waxaan u baahanahay inaan u dabaaldegno farxadda Aasiya Ameerika, taageerno farshaxanada Aasiya, ururada, iyo ganacsiyada, oo aan dhageysano codadka Aasiya. Iyada oo loo marayo taxane cusub oo ka kooban baraha bulshada waxaan ugu yeeraynaa #CelebrateAAPI, waxaan ku ifin doonnaa iftiin ururada badan ee Aasiyaanka Ameerika ee Jasiiradaha Baasifigga ah ee McKnight wuxuu leeyahay mudnaan uu ku yeesho wada-hawlgalayaasha deeqaha ee Minnesota. Waxaan ku sharfeynaa hogaamiyayaashan jaaliyad caqligooda iyo tabarucaad fara badan oo ka dhigaya gobolkayagu meel wanaagsan oo guryo loogu wici karo.
Raac #CelebrateAAPI iyada oo loo marayo tan Facebook, Twitter, iyo LinkedIn bogagga oo ku soo biir wadahadalka.
Isbahaysiga ee Hogaamiyeyaasha Aasiyaanka Aasiya
The Isbahaysiga hogaamiyayaasha Asian Aasiya waa shabakad caddaalad bulsheed oo hoggaamiyeyaal leh himilo ah in looga faa'iideysto awooddeena wadareed si loo hagaajiyo nolosha bulshada iyadoo la isku xirayo, wax la barto, waxna laga qabto.
Pangea wuxuu iftiimiyaa xaaladda aadanaha, wuxuu u dabaaldegaa kala duwanaanta dhaqanka, wuxuuna dhiirrigeliyaa xuquuqda aadanaha isagoo abuuraya soona bandhigaya tiyaatar caalami ah oo kala duwan.
2015 McKnight Farshaxan Yare Rick Shiomi waa aqoonyahan caalami ah, abaalmarin ku guuleystay Japanese Canadian riwaayad, agaasimaha masraxa, agaasimaha farshaxanka, iyo farshaxanka taiko.
HAFA waxay horumarisaa barwaaqada beeraleyda Hmong Ameerika iyadoo loo marayo dadaallo iskaashi, dhisid awood, iyo u doodid.
Aasiyaanka Aasiyaanka / Jasiiradaha Baasifiga ku yaal ee ku yaal Philanthropy
AAPIP waa urur xubin qaran oo u heellan ballaarinta iyo abaabulka kheyraadka samafalka iyo bulshada ee loogu talagalay bulshada AAPI ee aan adeegga lahayn si loo dhiso bulsho caddaalad iyo sinnaan ku dhisan.
Masraxa Mu waxay soo saartaa waxqabadyo waaweyn oo ka dhashay farshaxanka, sinnaanta, iyo caddaaladda laga soo qaado wadnaha waayo-aragnimada Aasiya Ameerika.
CAPI USA isku xira muhaajiriinta, qaxootiga, iyo dadka dhalashada Mareykanka ku leh midabka leh ilaha ay ugu baahanyihiin inay ku barwaaqoobaan.
Xarunta Fanka iyo Fanka
CHAT waxay u jirtaa kobcinta, sahaminta, iyo iftiiminta khibradda Hmong American iyada oo loo marayo tibaaxaha farshaxanka.
2011 McKnight Farshaxan Yare Ranee Ramaswamy wuxuu ahaa muusig yaqaan, jilid, iyo macalinka Bharatanatyam, qoob-ka-ciyaarka caadiga ah ee Koonfurta Hindiya, ee Magaalooyinka Mataanaha ilaa 1978.
TaikoArts Midwest waxay siisaa bulshadeena waxqabad tayo sare leh, waxay taageertaa farshaxanada taiko, waxayna xoojisaa oo ku dhistaa bulshada taiko.
Iskaashiga Hindida Maraykanka
Iskaashiga Hindida MaraykankaHadafku waa inaan bulshada ku xoojino inay soo dhaweyso awooda dhaqamadeena iyadoo la gaarayo kartideena.
Shirkadda Raamala Dance
Ragmala waa horudhac, haweeney hogaamiso, urur ay maamusho qoysku oo ay wadeen raadinta heer sare farshaxanimo. Iyada oo loo marayo qaabka qoob-ka-ciyaarka Koonfurta Hindiya ee Bharatanatyam, shaqada Ragamala - masraxa, bulshada dhexdeeda, iyo waxbaridda jiilka soo socda — waxay tusaale u tahay aqoonsiga dhaqammada malaayiin.
Iyada oo sawirkiisa xoogga leh iyo mashruucyada farshaxanka ee bulshada ku qasbaya, 2018 McKnight Farshaxan Yare Wing Young Huie waxay diiwaangelinaysay muuqaalka dhaqanka ee isbeddelaya Minnesota in ka badan 30 sano oo sawirro ah oo na weydiinaya inaan xoogga saarno dadka iyo meelaha inta badan la iska indhatiro
AEDAHadafku waa kordhinta fursadaha dhaqaale ee Aasiya Ameerika. Waxay saadaalinayaan xaafado kala duwan oo firfircoon oo ay ku dheehan tahay hodanka dhaqamada Aasiya Ameerika iyo hoggaan ahaanba.
Xarunta Dhaqanka ee Hmong
The Xarunta Dhaqanka ee Hmong waxay siisaa waxqabadyada wacyigalinta bulshada ee laxiriira waxbarashada dhaqamada kala duwan ujeeddooyinka ah kor uqaadida xiriirka qowmiyadeed ee wanaagsan ee bulshada Twin Cities.
Tiyaatarka Qoobka Katha wuxuu abuuraa, sameeyaa oo wax ku baraa qaababka farshaxanka ee qoob-ka-ciyaarka, muusikada, gabayada iyo sheekaynta. Ku xididaysan Kathak, qaabka qoob-ka-ciyaarka caadiga ah ee Waqooyiga Hindiya, KDT waxay u heellan tahay sameynta qoob-ka-ciyaarka la heli karo, loo dhan yahay oo khuseeya.
By Karyn Sciortino Johnson Sebtember 2021
McKnight wuxuu ku dhawaaqay Hadafka Fanka & Dhaqanka Cusub iyo Tilmaamaha
By Soo Baxayaasha DeAnna Ogosto 2021